Ungayidweba njani ihashe kunye nepensile ngokwamanqanaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ukuzoba ihashe ngepensile kwinqanaba?
Ndiza kuzama ukubonisa ihashe, mhlawumbi yile nto yenzekayo. Okokuqala, sibonisa i-oval yomzimba, kwaye ngaphezulu nje kwe-oval yentloko, emva koko uyixhume ngemigca, le iya kuba yintamo
. Okulandelayo, sibonisa imincili yokwenza intloko kunye nencasa, kwaye kuphela emva koko uzobe ubuso, umva kunye nomhlathi wehashe lethu. Ungalibali ukuyila imilenze nomlomo wesilwanyana
. Ngoku uyolo luqala. Sitsalela iindlebe, amehlo kunye nekhala. Ukuba iyasebenza, siyahamba, okunene siye emilenzeni, oku kuya kufuneka kuphume
. Ewe, kwenzeka ntoni? Siyaqhubeka nenxalenye yokugqibela yomfanekiso. Zoba umsila kunye ne-mane, kwaye uphinde uqinise umva wemilenze
. Kulungile, kungenzeka konke, kusele ukupeyinta izithunzi wenze into ebonakalayo, njengamanani anikiweyo apha ngezantsi.
. Yiyo, ihashe lilungile, kulungile, intle.
Ukuzoba ihashe kulula kakhulu !!! Ukwenza oku, uyakufuna:
okokuqala zoba iinkcukacha ezinkulu;
emva koko kwaye kuphela emva koko, zoba iinkcukacha ezincinci;
Olu lungelelwaniso lomzobo wehashe oluchanekileyo:
Ke ungazoba ihashe lakhula.
Ke ungazoba ihashe ngelixa ugijima - ihashe elibalekayo.
Kwaye oku kunjalo xa kuthetha INDLELA YOKUZIPHATHA KAKHULU.
Njengoko ubona, wonke umsebenzi wenziwa ngamanqanaba, kodwa kumava am kunzima abantwana ukuzoba ngolu hlobo ukuzoba umfanekiso ogqityiweyo. Kodwa bafundisa abantwana ukuzoba ngaloo ndlela.
Ihashe sisilwanyana esihle, zingaphi iindawo zaso. Akukho lula kangako ukuzoba, ngakumbi kum, owayehlala ekuthanda umzobo, kwaye engazihoyi izifundo zokuzoba. Kodwa unokufunda, zama, kuba oku ngokuthe ngqo kuthelekisa ulwalamano lomzimba, intamo, intloko. Kuqala, faka uhlobo lwesangqa, umfanekiso ojikeleze amalungu omzimba wehashe, ukuba uwenze njani ngokuchanekileyo, ungalandelwa ngala manani:
Nasiphi na isilwanyana, ndihlala ndincomela ukuqala ukudweba ngee-ovals ezimbini. Eli iya kuba linyathelo lokuqala. Kule meko, i-ovval yokuqala yintloko yesilwanyana, kwaye i-ovval yesibini ngumzimba wayo. Dibanisa ezi ovals zombini ngomtya, kwaye uya kufumana intamo. Ihlala kuphela ekupeyinteni kwiinkcukacha ezahlukeneyo, jonga ngezantsi umzobo ngamanyathelo ehashe elilula:
Ijika ibe lihashe eligijimayo, ekulula kakhulu ukuba lifake imibala kwinqanaba lokugqibela.
Amahashe zezona zilwanyana zibalaseleyo kwaye andimangalisi yile yokuba abantwana bayakuthanda ukuzoba, kunye nokuqokelela amanani. Umzekelo, sinomhlambi wonke sele uqokelele ebhokisini. Ngamanye amaxesha siye sifumane ukutya emadolweni;) Kwaye ungazoba usebenzisa izikim, ezininzi kakhulu kwi-Intanethi. Kwaye kulo mfanekiso kukho amahashe ekhathuni, iiponki. Kwaye amahashe akhula. Ngokubanzi, zininzi izinto onokukhetha kuzo. Kuya kuba nzima ukuba kuqalile ukuzala, kuba ezona ndlela zilula zezindlovu. Kodwa ungazama ukuqala koku.
Kubangela umdla ngakumbi ukuzoba, kunjalo, ekuhambeni, ukuze ihashe lifane nevolumu. Kukho kwakhona tutorials zevidiyo, umzekelo, ungasebenzisa oku kulandelayo:
Into ephambili kukujonga ubungakanani kwaye, ngenxa yoko, uzoba ngokucacileyo zonke iinkcukacha. Ngethamsanqa
Akunzima ukuzoba ihashe, uyakufuna ipensile ebukhali kunye nomonde omncinci
Sizoba isangqa, sibaxhuma ngemigca, endaweni yeempuphu, kude kube ngoku oonxantathu.
Ujikeleza umzimba wehashe umzimba, uzoba amalungu omzimba.
Ke ngoku siza kucima yonke imigca eyongezelelweyo kwaye sipeyinte ihashe lethu elincinci :)
Uyidweba njani ihashe okanye ihashe kunye nepensile? Okokuqala, lola ipensile kakuhle, lungiselela iphepha kunye neraser (uya kuyidinga ngokuqinisekileyo), emva koko ukhethe iskimu somzobo osithandayo nesizoba ubumnandi!
Ndicebisa ukuzoba ihashe elinje:
Ukuzoba i-e ilula. Jonga inyathelo ngenyathelo umzobo wendlela yokuzoba ihashe kunye nepensile ngokwamanqanaba. Ndicinga ukuba iya kulunga kuwe:
Kunzima ukuchaza ngamagama, kodwa ndiza kuzama. Kwindlela, kukho imibhalo yemizobo yamahashe. Kungcono ukuqala ngokuchaza ngokubanzi umzimba wehashe, ukumisela ubungakanani bomzobo. Emva koko sichaza ububanzi behashe, isiphumo. Ukuba imemori ebonakalayo kunye neso kulungile, akunzima. Unokuziqeqesha kwifoto yehashe. Kulula kum ukwenza oku ngama-ovals. Omkhulu - umzimba, mncinci - intamo, nokuba ungaphantsi - entloko. Imilenze iphinde yaphakanyiswa, i-ovals ende. Iindawo zokungenelela, ukugqobhoza ii-ovals kwenye nganye kufanele ukuba zihambelane ngokudibeneyo kunye nokudibana kwenxalenye yomzimba wehashe ukuya kwelinye. Cacisa iinkalo ze-anatomical ekupheleni komzobo.
Zoba ihashe Kunzima kakhulu, kuba kufuneka ubonakalise ubabalo lwayo, ubabalo, ukubaleka ubaleke - kwaye ayinguye wonke umntu onokuyenza. Izikim zokudweba ezibuyiselweyo yenza lula yonke inkqubo, nantsi izibini:
Ukukhetha izikimu kukhulu kakhulu, apha unokufumana ukudweba ihashe kumzobo womntwana, okanye ngakumbi nangakumbi, kodwa ihashe ngokwalo liya kuphumelela. Unokukhetha nasiphi na isikhundla sehashe, umzekelo, indlela emi ngayo emilenzeni asemva kwayo, okanye indlela athule ngokuzola ingca, kukho nesifundo esibonisa ukuzoba ubuso behashe.
Ndicinga ukuba imizobo ibonisa ukuba umzobo uqalisa ngokutsala sketchy okanye ngesiketshi se-quot; skeleton quot ;, kwaye emva koko kukwakhiwa kancinci kweenkcukacha ezincinci.
Zoba ihashe ayilula. Kodwa ngenxa yobunkokeli obunqanaba, ungawenza lula umsebenzi wakho.
Okokuqala, zoba imincili yentloko yehashe, umzimba, kunye nemilenze yangaphambili.
Ke iliso, intloko nentamo, i-ponytail kunye nokugqiba ukuzoba imilenze yangaphambili.
Sitsala iindlebe, siye kwi-mane kunye nasemilenzeni yemilenze.
Sinqwala i-mane, sigqiba umsila kwaye sitsale amabala emzimbeni wehashe.
Sicoca imigca yokuncedisa kwaye nehashe litsaliwe. Unokuhombisa ihashe ngombala.
Ndiza kunika imizekelo yamahashe aya kuba nomdla ukuzoba nabantwana, nokuba ayingomculi. Kodwa malunga nemizobo enzulu yokwenene yamahashe, mhlawumbi kuya kufuneka ufunde kwisikolo sobugcisa.